Ilayisi elinesibindi nokholifulawa | Ukupheka Kwekhishi
Ilayisi elinesibindi nokholifulawa
Impelasonto yisikhathi selayisi ezindlini eziningi, kubandakanya neyami. Izikhathi eziningi, ngokungeziwe, izithako unikezwa zona ngakho-ke asikho isidingo sokucabanga. Ngakho-ke kwenzeka ngalokhu irayisi elinesibindi nokholifulawa, Izithako zazo ezingabhekwa kodwa ngomphumela wesidingo sokubanikeza okuphumayo.
Avule ifriji Futhi ukuzivumela sithathwe yizithako esesizokonakalisa kusivumela ukuthi sizame izinhlanganisela okungenzeka ukuthi besingeke sibheje ngazo ngendlela ecabangayo. Futhi iqiniso ukuthi iningi lalezi zinhlanganisela ziyasebenza. Isivivinyo iresiphi engiyiphakamisayo namhlanje.
Isithombe sibuhlungu futhi asenzi ubulungiswa ekuthungeni nasekunambitheni kwalesi sidlo selayisi. I- isisekelo semifino Yenza le rayisi ibe namanzi kakhulu futhi iqiniso lokuluma ngezindlela ezahlukahlukene ezifana nesibindi esithosiwe nokholifulawa liyenza lithakazelise. Siphinde sangeza ezinye izinongo, uyafuna ukwazi ukuthi iziphi?
Le Irayisi Yesibindi Irayisi iyindlela enhle yokupheka ngempelasonto. Kuphake njengesitsha esisodwa, kuhambisane ne-dessert.
2 izibopho zesibindi, uthathe izicucu
Pepper upelepele obomvu, oqoshiwe
1 isipuni utamatisi unama
½ ukholifulawa kuma-florets
Izingilazi ezi-3 zomhluzi wemifino noma wenkukhu
Simisa isibindi futhi sithosa emafutheni ukubhobhoza okushisayo ebhodweni elingajulile. Uma sesiyigolide, siyayikhipha bese siyabeka.
Kuwoyela ofanayo faka u-anyanisi nopelepele imizuzu emihlanu.
Sithela iwayini futhi yehlise okwemizuzu embalwa.
Ngemuva kwalokho engeza utamatisi ogxilile, ukholifulawa ne-turmeric bese ushutha imizuzu embalwa.
Ngemuva kwalokho sifaka irayisi bese sixuba ngaphambili faka umhluzi obilayo, usawoti kanye nopelepele.
Sipheka irayisi imbozwe imizuzu eyisithupha ngaphezu kokushisa okuphakathi naphakathi. Ngemuva kwalokho, sembula futhi sinciphise ukushisa ukuze sikupheke eminye imizuzu eyi-10, sifaka isibindi imizuzu embalwa ngaphambi kokuphela.
Susa emlilweni, umboze ngendwangu bese mayiphumule imizuzu emibili irayisi elinesibindi nokholifulawa ngaphambi kokuphaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Pasta » Ilayisi elinesibindi nokholifulawa
I-asparagus eluhlaza kanye ukhilimu wamazambane